Fitohizan'ny hafatra : fa ra zany olona mieritreritra oe anazy zany enao ...
tranokwly - 24/06/2016 09:53
fa ra zany olona mieritreritra oe anazy zany enao d tena ho lahona enao vo ofaka madiodio aminy ,fade inona lotr r ty nanjo anao e? enao v zany tena ny "force"dryzareo e s aon e ?soa ian f endry l sipanao f ratsizany d vomafy enao,tena ohn mijery irony série télénovela irony mamak n tantaranao,ataov matotr d valiteny sy torohevtr matotr no azonao
Rizaho - 05/07/2016 11:12
Ai efa misy valiny ato aminy pejy faha 2 fa tsy hitako. Raha araky ny fahitako azy de ny tsy fahaizako nitondra tena taminy adolantsento no nahatonga izany rehetra izany rehefa maty ny reniko, tsy niraharaha an'iza n'iza a, nefa amin'izao, misy ny zanako, misy ny olon-tiko sy tena tia ahy vao voadona aho. Efa nisy olana be mihintsy teo aminy'io renin-janako sy io sipako io ary izany aza mo no anisany nahatonga ahy hiverina aminy sipako ko. Manome tsiny ilay sipako ihany aloha aho fa fantatro kosa anefa ny toe-tsainy e, nila resaka taminy renin-janako izy satria hainy a hoe rehefa tsy hiala aminy izay de tsy hiala, de tsy nisy resaka akory fa vono no nataon'ilay renin-janako azy, tsy mitovy ny fomba e. nalahelo mafy an'ilay sipako aho tamin'izay, izy nieritreritra ny hanao copine copine hay zavatra hafa no niseho. Tsy hitako intsony izay atao fa na ny fianakaviako aza mialangalana be avokoa ka aleoko raisina ny andraikitro ao anatin'izany. Tena serieux za miresaka aminao io sao heverinao ho mihanihany a. Ny tena marina tsy nisaina akory aho nanao io soratra io, taitatra foana, za ko mo tsy mitsinjo ny ho avy znay mihintsy fa ze hamezivezeny fianana ahy eny foana, raha ny tiko aloha tsy mbola nanao an'io fa tsy haiko angamba ny nanda azy, sady nieritreritra ny zanako ko sy ny hoe tsy mba ho eo aminy fotoana ilainy ahy. zay no tena hitako hoe nanaovako an'io fa tsy haiko tsony e, ny hoe forcer, ankolaka angamba, nitomany mihintsy ilay renin'ilay renin-janako fa hoe lany vola hono raha tsy manao aho ka de nataoko ny farany.
mpilaza444 - 09/11/2017 14:31
Tsy maintsy mametraka fangatahana fisaraham-panambadiana eny amin'ny fitsarana ianao raha toa ka efa mihoatra ny iray volana. Fa raha vao haingana kely dia vita eny amin'ny mairie ihany ny fisarahana.